Motorola က Moto G (3တတိယအကြိမ်မြောက်ဗိုလ်ချုပ်) ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Motorola က Moto G (3တတိယအကြိမ်မြောက်ဗိုလ်ချုပ်) ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါတတိယမျိုးဆက် Moto G သေးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါတည်ဆောက်အရည်အသွေးမြင့်မြတ်သောဖြစ်ပါသည်, မျက်နှာပြင်လျောက်ပတ်သော, ဖုန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို snappy, နှင့်ကင်မရာကိုအစိုင်အခဲသည်.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Motorola က Moto G (3တတိယအကြိမ်မြောက်ဗိုလ်ချုပ်) ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: အကောင်းဆုံးကိုဘတ်ဂျက်စမတ်ဖုန်းပဲပိုကောင်းတယ်” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com သောကြာနေ့ 7th သြဂုတ်လအပေါ်များအတွက် 2015 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Motorola ရဲ့ဘတ်ဂျက် Moto G တက်လာခဲ့သည်, ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့ကင်မရာကမ, ရေစိုခံတာနှင့်အသစ် features တွေပိုပြီးငွေကုန်ကြေးစျေးနှုန်းကိုအပြစ်လွတ်?
အဆိုပါ မူရင်း Moto G ဘတ်ဂျက်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သင့်သောအရာကိုပြန်လည်အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင်, အထဲတွင်စတင်သောအခါအ 2013. ဒါဟာနှေးနှေးမဟုတ်ခဲ့ကြောင်း£ 150 အောက်တွင်ပထမဦးဆုံး Android ဖုန်းကိုကြီးသုံးစွဲဖို့ infuriating, ကအရေးပါပါတယ်ဘယ်မှာကြောင့် skimp ဘူး.
ရှေ့ဆက်အစာရှောင်ခြင်းနှစ်နှစ်နှင့် တတိယမျိုးဆက် Moto G မူရင်းမှန်ကိုပြုရာ၏တာကိုထောက်ပံ့ပေး. စမတ်ဖုန်းနည်းပညာကိုတိုးတက်မူသည်နည်းတူ, ဒါပေမယ့်ဒါဘတ်ဂျက်ဟာ့ဒ်ဝဲရှိပါတယ်. အ Moto G မှိုတစ်ပင်လယ်၌ကောင်းသော၏အချက်ပြမီးရောင်အဖြစ်တယောက်တည်းရပ်လျက်အဘယ်မှာရှိ, ယနေ့ဝယ်ယူအ​​များအပြားကပိုတန်ဖိုးရှိရှိပါတယ်.
ဒါကြောင့်က Motorola တိုးတက်လာသော features တွေကိုတွန်းလိုက်ပါတယ်, အရည်အသွေးနှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းတညျဆောကျ, ဒါပေမဲ့အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားအတွက်ကြောင့်ဘတ်ဂျက်စျေးကွက်၏အလွန်အစွန်းမှစျေးနှုန်းတွန်း.
အဆိုပါ Moto G ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့နောက်ကျောနှင့်အတူ၎င်း၏ High-end Moto X ကိုစမတ်ဖုန်းကနေ Motorola ရဲ့အသစ်ကွေးဒီဇိုင်းအမွေ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Moto G ရဲ့ဒီဇိုင်းပြီးနောက်စစ်နှင့်ကြာခဲ့ Motorola ရဲ့ Moto X ကို နှင့် ကို Nexus6ဖုန်းများ. အဆိုပါဖန်မျက်နှာပြင်သတ္တုကဲ့သို့ပလပ်စတစ်ကဝိုင်းသည်. နောက်ကျောယခုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ ribbed ရှိပါတယ်, ကွေးပလပ်စတစ်နောက်ကျောနှင့်ကင်မရာကိုရရှိထားသူတစ်ဦး, ငွေသတ္တုဘား.
IP67 စံချိန်စံညွှန်းမှ Waterproofing များအတွက် 1 မိနစ်နက်ရှိုင်းသောရေထဲသို့ပေါက်ကိုဆိုလိုသည် 30 မိနစ်ပြဿနာမဟုတ်, ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့နောက်ကျောကိုပိုမိုသိုလှောင်ကာ microSD card slot ဖုံးကွယ်စဉ်, ဒါပေမဲ့မဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ဘက်ထရီ.
အဆိုပါကွေးကျောနှင့်နှစ်ဖက်အကိုက်ညီများမှာ, ဒါပေမဲ့ 11.6mm အထူမှာဖုန်းကိုဒီနေ့ရဲ့ Sub-10 မီလီမီတာစံချိန်စံညွှန်းများကအတော်လေး chunky ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာလက်၌သိသာမဟုတ်ပါဘူး, သို့သော်.
အဆိုပါ Moto G ရဲ့ 5in မျက်နှာပြင်၏တစ်ဦး pixel သိပ်သည်းဆနှင့်အတူ 720p HD ကိုတစ်ဦး resolution ကိုရှိပါတယ် 294 လက်မအရွယ်ကတော့ pixels per. ဒါဟာထက်သိသာ crisper ဖြစ်ပါသည် အနိမ့် resolution ကို Moto E ကို, 1080p သို့မဟုတ်မြင့်မား resolution ကိုဖန်သားပြင်နှင့်အတူ ပို. စျေးကြီးစမတ်ဖုန်းအဖြစ်ပေမယ်အဖြစ်ထက်သောမ, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် တစ်ခုမှာ OnePlus, Samsung ရဲ့ Galaxy S6 သို့မဟုတ် LG က G4.
Screen ကို: 5720p HD display ပါရှိ (294ppi)
processor: 1.4 GHz အမြန်နှုန်း Quad-core Qualcomm Snapdragon 410
ရမ်: 1RAM ကို GB ကို (216GB storage ကိုမူကွဲအပေါ် GB ကို)
သိုလှောင်ခြင်း: 8/16GB ကို + microSD card slot (32GB အထိ)
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Android မှာ 5.1.1 "Lollipop"
ကင်မရာကို: 13--megapixel အနောက်နှင့် 5-megapixel front-facing ကင်မရာက
connectivity ကို: 4က G, ဝိုင်ဖိုင်, ဘလူးတုသ် 4.0, FM ရေဒီယိုနှင့် GPS စနစ်
ဒိုင်မန်းရှင်း: 142.1 x က 72.4 x က 11.6 မီလီမီတာ
ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့နောက်ကျောကို micro SIM ကဒ်နဲ့ microSD card slot ကဖုံးကွယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါတတိယမျိုးဆက် Moto G သည့်အဆင့်မြှင့် 1.4GHz Quad-core Snapdragon ရှိပါတယ် 410 နှင့် RAM ကို 1GB သို့မဟုတ် 2GB တစ်ဦးရှေးခယျြမှုသိုလှောင်မူကွဲပေါ် မူတည်..
သိုလှောင်မှု 16GB နှင့် RAM ကို 2GB နှင့်အတူအဆိုပါဗားရှင်း, စမျးသပျအဖြစ်, မျိုးဆက်ဟောင်း Moto G ထက်အနည်းငယ် snappier ခံစားရ, နှင့်စမတ်ဖုန်းအားလုံးပေမယ့်အလွန်လျင်မြန်ဆုံးနှင့်အတူတန်းတူအပေါ်အလွယ်တကူဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါ multitasking ကိုမီနူး, အရာယခင်ကအသုံးပြု applications များဖြင့်ကတ်များတစ် stack တက်တတ်၏, အထူးသဖြင့် snappy ဖြစ်ပါသည် - တစ်ခုခုပင်£ 500 သို့မဟုတ်နှင့်ပိုမိုရုန်းကန်ကုန်ကျ smartphones.
အဆိုပါ Moto G တသမတ်တည်းပတ်ပတ်လည်နှင့်အတူ 7am မှာအသုံးတက်၏တဦးတည်းအပြည့်အဝနေ့ကကြာ 25% ငါ၏အစမ်းသပ်ခြင်းအတွက် 10pm ခြင်းဖြင့်ကျန်ရစ်ဘက်ထရီ, စဉ်ဆက်မပြတ်တွန်းအားပေးတဲ့အီးမေးလ်နှင့်အတူ, အသိပေးချက်များ၏စာရေး, 60 Bluetooth ကိုကျော်ဂီတပြန်ဖွင်၏မိနစ်, 1.5 browsing နဲ့အလင်းဂိမ်းတစ်နည်းနည်းနာရီ.
ပေါ့ပါးအသုံးပြုမှုစွဲချက်အကြားနှစ်ရက်ကတဆင့်အလွယ်တကူ Moto G မြင်ရပါလိမ့်မယ်.
Google ရဲ့ Android
အဆိုပါ Moto G စံ Android ကိုပြေး 5.1.1 Lollipop, Motorola ရဲ့ app များကိုသာအနည်းငယ်ကိုသာဖြည့်စွက် marking နှင့်အတူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Moto G ၏ Google ရဲ့နောက်ဆုံးဗားရှင်းနဲ့ Pre-loaded လာ Android မှာ 5.1.1 Lollipop, တစ်စင်သောဖြစ်ပါသည်, သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးဆွဲဆောင်မှုမိုဘိုင်း operating system ကို.
Motorola ကလည်း၎င်း၏ app များကိုအနည်းငယ်ထောက်ပံ့ပေး, အရာတစ်ခုခုကို Google ထံမှအခြားသူများကိုသို့မဟုတ် third-party developer များနှင့်အတူအသုံးပြုသို့မဟုတ်အစားထိုးနိုင်ပါတယ်. မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုထိုကဲ့သို့သောသူတို့အိမ်ပြန်ရတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုအသံတိတ်သွားအဖြစ်သို့မဟုတ်အစည်းအဝေးတွေရှိနေစဉ်အလိုအလျောက်တာဝန်များကိုထူထေ​​ာင်ခွင့်ပြုရာက Moto လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောကရာတေးခုတ်အဖြစ်သို့မဟုတ်အဆိုကိုထိန်းချုပ်ထားသောမူအယာများ, သောမီးရှူးများအတွက် Flash ကိုအပေါ်လှည့်. အားလုံးကောင်းစွာအလုပ်လုပ်.
Motorola ရဲ့ Migration utility ကိုလည်းတစ်ဦး iP​​hone မှ switch ကိုကူညီပေးသည်, လွှဲပြောင်းအဆက်အသွယ်များနှင့်ပြက္ခဒိန် entries တွေကိုအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အခြား Android ဖုန်းမှနီးပါးအရာအားလုံးကို.
အဆိုပါ Motorola ကိုကင်မရာက app ကိုဓာတ်ပုံဆည်းပူးနေရိုးရှင်းစွာ, တစ်ဆလိုက်ထုတ် setting များကိုဘီးနှင့်ကိုအသာပုတ်-ဘယ်နေရာမှာမဆို-to-shoot ကင်နှင့်အတူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Moto G ရဲ့ကင်မရာကိုအများကြီးတိုးတက်လာသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မော်ဒယ်ကျော်. 13-megapixel ကင်မရာကင်မရာဖြစ်ပါတယ် က Nexus မှာအသုံးပြုတဲ့အဖြစ်အတူတူပင်6ကောင်းသောအသေးစိတ်နှင့်အတူလျောက်ပတ်သောရုပ်တုဆင်းတုကိုထုတ်လုပ်, အရောင်နဲ့ကောင်းသောအနိမ့်အလင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို. ဒါဟာပြိုင်ဆိုင်မှုအများစုထက်သိသိသာသာ သာ. ကောင်း၏.
အဆိုပါငါး-megapixel ကင်မရာ selfie ကင်မရာကိုအစိုင်အခဲသည်, ဖုန်းပေါ်မှာကြည့်ရှုဘို့လျောက်ပတ်သောဓါတ်ပုံကိုထုတ်လုပ်. အဆိုပါဓါတ်ပုံအပြည့်အဝ resolution ကိုမှာအသေးစိတ်ကင်းမဲ့, သို့သော်.
ရိုးရှင်းသော Motorola ကိုကင်မရာက app ကိုလျှင်မြန်စွာဖုန်းကိုသော့ခတ်သည်ပင်တဲ့အခါလိမ်အမူအရာအားဖြင့် activated နိုင်ပါတယ်. အများဆုံးအခြားကင်မရာက applications များနှင့်မတူဘဲ, ပုံမှန်အားဖြင့် screen ကိုပုတ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုယူမယ့်အစားအာရုံစူးစိုက်. မျက်နှာပြင်ဆင်းကျင်းပခြင်းကွဲမီးအတွက် activate, အပြခန်းလက်ဝဲ display တွေရွေးချယ်စရာကနေနှင့်လက်ျာတော်မှထွက်လျှောစဉ်.
ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ရဲ့ကောင်းမွန်စွာအချိန်အများစုကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်, ရံဖန်ရံခါကငါကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ရာလွဲချော်မယ်လို့ပေမယ့်. manual focus နှင့်ထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်မှုရရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့ Third-party ကကင်မရာ app များကိုထိုကဲ့သို့သော Google ရဲ့ကင်မရာ app ကိုအဖြစ်တည်ရှိနေ.
အဆိုပါတတိယမျိုးဆက် Moto G 8GB ဘို့£ 159 ကုန်ကျနှင့် RAM ကို 2GB နှင့်အတူ 16GB ဗားရှင်း£ 209.
အဆိုပါ Moto G လည်း Motorola ရဲ့ Moto သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုသုံးပြီးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်, ဖုန်းရဲ့နောက်ကျောကိုပြောင်းလဲဖို့, £ 179 မှာစတင်ရှေ့နှင့်ဘေးဘက်အရောင်များ.
အဆိုပါ Moto G ထို 6in ကို Nexus မှ 13-megapixel ကင်မရာအမွေ 6. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဒါဟာလက်၌ကြီးသောခံစားရနှင့် ribbed ပြန်ချုပ်ကိုင်ဖို့လွယ်ကူစေသည်. အဆိုပါဘက်ထရီသက်တမ်းလည်းအစိုင်အခဲဖြစ်ပြီးရေစိုခံတာကြောင့်အိမ်သာကဆင်းတဲ့ခရီးစဉ်ကိုဆက်လက်ရှင်သန်လိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်. များသောအန်းဒရွိုက်ဖုန်းများ 5in ကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့ဖန်သားပြင်နှင့်အတူလာ, အ Moto G အဓိပ္ပာယ်ငြင်းခုံဖွယ်အကောင်းဆုံးအတစ်ခုဖြစ်သည်.
အကြီးမားဆုံးပြဿနာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်. RAM ကို၏ 2GB နှင့်အတူ 16GB version ကိုအကြံပြုသည်, ဒါပေမဲ့£ 209 မှာမရှိတော့အရမ်းစျေးပေါဖြစ်ပါသည်, ၏အကြိုက်၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေးသို့ verging အ OnePlus တစ်ခုမှာ. မြျှောလငျ့စှာ, ယခင်ဗားရှင်းနဲ့တူ, ဒါကြောင့်မကြာမီ Third-party လက်လီအရောင်းဆိုင်များမှကုန်ကျစရိတ်အတွက် drop လိမ့်မည်.
က Moto G ဆဲငြင်းခုံဖွယ်ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဘတ်ဂျက်စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်ရပ်အဖြစ်, အဲဒါကိုဖြစ်ဖို့အသုံးပြုအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်စျေးပေါမဟုတ်ပါဘူးလျှင်ပင်.
အကောင်းအဆိုး: အစိုင်အခဲတည်ဆောက်, လျောက်ပတ်သောကင်မရာကို, ကောင်းသောဘက်ထရီသက်တမ်း, ရေစိုခံ, လျောက်ပတ်သောမျက်နှာပြင်, microSD card slot
Cons: ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုသကဲ့သို့စျေးပေါမဟုတ်, 8GB ကိုမော်ဒယ်သာ RAM ကို 1GB ရှိပါတယ်, ပလပ်စတစ် edging အလွယ်တကူပျက်စီး
Moto လုပ်ဆောင်ချက်များကင်မရာစတင်သို့မဟုတ်တစ်မီးရှူးတိုင်အဖြစ် flash ကိုမီးထွန်းနှစ်ခုအမြန်မူအယာများထောက်ပံ့ပေး, ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နှစ်ဦးစလုံး၏. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
• အကောင်းဆုံးအဘယ်သည် 2014 ထက်လျော့နည်း£ 150 များအတွက်စမတ်ဖုန်း?
• ထိပ်တန်း5phablet: ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်စမတ်ဖုန်းမိတ်ဆွေတို့ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်တယ်?
• ဟွာဝေး P8 ပြန်လည်သုံးသပ်: ပိန်သော, အစွမ်းထက်နှင့်ယှဉ်ပြိုင် undercuts
Android မှာ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, Lenovo က, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ
← ငါဘယ်လိုတစ်ခု admin ရဲ့ password ကိုဘဲငါရဲ့ PC သို့ရနိုငျ? ငါးကိုရေနံအများဆုံးစွန့်စားမှုကနေသူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုတားဆီးနိုင်ကူညီနိုငျ →